Distrikan’Isandra : Sambany nahazo rano fisotro madio -
AccueilRaharaham-pirenenaDistrikan’Isandra : Sambany nahazo rano fisotro madio
23/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toa ny firenena rehetra manerantany, dia isan’ny nankalaza ny andro eran-tany momba ny rano ihany koa i Madagasikara, omaly. Ny kaominina Ambondrona, ao anatin’ny distrikan’Isandra, faritra Matsiatra Ambony no nosafidiana nanaovana ny fanamarihana, niaraka tamin’ny Filohan’ny repoblikan’i Madagasikara, Rajaonarimampianina Hery ary notronin’ny minisitra ny Rano, angovo ary ny akoran’afo, Rasoloelison Lantoniaina sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, ary ireo mpiara-miombon’antoka. Nandritra izany no nitokanan’ny Filoham-pirenena, ny fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio, fiaraha-miasa amin’ny Grand Lion, ka samy nahazo izany avokoa ireo faritra manodidina, indrindra ireo sekoly. Fitokanana izay tafiditra ao anatin’ny vinan’ny fisandratana avokoa, ka inoana fa tsy maintsy ho tratra ny tanjona hoy ny Filoha. Satria marihina fa sambany tao anatin’ny 50 taona nahazoana fahaleovantena no nahazo rano fisotro madio ny distrikan’Isandra, izay antoky ny fahavelomana. “Imbetsaka no nieritreritra fa mila fandaminana, ny jiro sy rano no tena zava-dehibe, fahasalamana ho an’ny zaza, reny bevohoka, fahadiovana sy fidiovana, ilaina ny fisandratana toe-tsaina madio ho amin’ny fitiavan-tanidnrazana, diovy izay maloto, toe-tsaina vaovao entina hampandrosaona ao anaty ny fisandratana”, hoy ny Filoha. Marihina fa izay tsy fisian’ny rano fisotro madio izay nisy fiantraikany teo amin’ny fidiran’ireo mpianatra tany an-tsekoly, raha ny vaovao voaray, dia noho ny aretina azo vokatra izany fa amin’izao fahazoana rano fisotro madio izao dia haharisika kokoa ireo mpianatra mamonjy ny efitranon-tsekoly. Tsy hijanona eo fa eo hatrany ny Filoham-pirenena hanampy ny vahoakan’Isandra, hoy ny fanambarany nandritra ny fandraisam-pitenenana. “Hitodika amin’ny firenena satria ho fisandratana ny firenena no hiadiana. Tsy miala aminareo hatramin’ny farany ny Filoha satria adidin’ny Filoha no manampy ny vahoaka, ary izany no hitondrainy ny fahavelomana dia ny rano izany satria tsy mpamono olona ny Filoha fa natao hiaro ny vahoakany. Mieritreritra ny vahoaka foana ny Filoha, noho izany, hitondra vahaolana fa tsy hametraka olana no hahatongavako eto. Mbola lavitra ny hiarahantsika, tsy avelantsika raha tsy misandratra ny firenena. Fantatra ny Filoha fa ao aminareo izany toe-tsaina izany, izay mivoy ny toe-tsaina ny fisandratana. Isandra no tena miverimberina ao, ka hihazakazaka amin’ny fampandrosoana. Manana vina ny Filoha dia ny fampandrosoana fototra, ka ny vahoaka maro an’isa no hiaraka aminy, ary mahareta amin’izany fiarahantsika izany fa tsy mora ny lalana aleha”, hoy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, tany Isandra.
Vonona hanarina ny firenena
“Tao anatin’ny 50 taona mahery no nahalavo ny firenena, ka vonona ny Filoha hanarina izany. Efa misandratra ny fari-piainan’ny tsirairay ary fantatry ny Filoha izany. Eny, fa na dia tsy misy fiantraikany ao anaty vilia aza aloha. Izany foana no averimberin’ny sasany nefa izy tsy mameno ny anatin’ny vilian’ny sasany akory”, hoy hatrany ny Filoha nanome toky ireo mponin’Isandra amin’ny fahavononany hampandroso an’i Madagasikara. Nambarany fa izany fisandratana izany dia fialana amin’ny fahantrana, ary hiantefan’ny fampandrosoana voalohany, dia ny fambolena mba hampitomboana ny vokatra miakatra eny an-tsena. Ny Filoha izay nanome toky fa eo an-damosinireo tantsaha hatrany amin’ny famatsiana ny masomboly sy fitaovana amin’ny alalan’ny teknikam-pambolena. Fa mba hampitomboana ireo vokatra sy ny fiompiana ireo nampanantena ny tenany fa hamboarina ny lalana mba hahafahana mamoaka ny vokatra sy hitsinjovana ihany koa ny fandriam-pahalemana mba hisy fiantraikany amin’ny lafiny ara-tsosialin’ny mponina. Eo koa ny fanorenana ny lisea, satria mahafinaritra ny maheno ny tanora manana fanantenana hoy ny tenin’ny Filoha hatrany, “efa hanomboka ary tsy hamelana raha tsy vita. Izay ny teniko dia tsy maintsy hotanterahiko, ary tsy vitan’ny resaka fa hitondra fanampiana sy fitaovana maro.” Ny fitokanana ny fotodrafitrasa dia nanolotra vary 50 gony, fanamiana mpanao baolina 26 isa, ny Filoha. Nisy koa ny “sarcleuse” 4000 natolotry ny repoblikan’i Korean ka 500 amin’izany ho an’ny distrikan’Isandra. Eo koa ny “pompe à pédale” miisa 100, “débatteuse” 100 isa. Ny Fida ihany koa amin’ny alalan’ny tetikasa Aropa, nanolotra « extracteur » miisa 4, « décortiquer » miisa 2, fiompiana tantely 1 000 isa ary môtô 13 isa ho an’ireo ben’ny tanàna ao amin’izany distrika izany. Nomarihany hatrany fa, « tsy resaka mandalo fotsiny fa miaraka amin’ny asa ny zavatra ampanantenany. Nefa mila fitoniana eo amin’ny fiarahamonina sy ara-politika mba hahafahana manatanteraka izany. Jereo ny zavatra efa nahazo ny firenena, ary tazony ny fisandratana izay efa hita taratra ankehitriny. Tsy hiala aminareo ny Filoha, fantany ny lalany izorany, fantany fa mbola lavitra ny lalana, fa raha miaraka amin’ny vahoaka dia ho vita izany.»